ရောမသည်ဥရောပသို့အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားရောက်ရန်မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည်. ရှေးခေတ်ရောမမြို့၌တည်၏, ဆွဲဆောင်မှုအများဆုံး, ဟိုတယ်များ, နှင့်စားသောက်ဆိုင်များသည်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်လုံးဝလက်လှမ်းမီသည်. ဆိုလိုသည်မှာမြို့လမ်းဘေးရှိလူအားလုံးတို့သည်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်များအတွက်ချဉ်းကပ်လမ်းများရှိသည်, နှင့်မြို့တော်ကိုပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်ကို၏, သင်လမ်းလျှောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်.
ရောမသည်မြင့်မားသောရာသီ၌အတော်လေးလူစည်ကားခံရဖို့ရရှိသွားတဲ့နေစဉ်, လျှင်သင် ရာသီမရွေးခရီးသွားခြင်း, ကျဆုံးခြင်းအတွက်, ဥပမာ, သငျသညျနီးပါးလုံးဝကိုယ့်ကိုကိုယ်မှရောမမြို့ရှိရလိမ့်မယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများသည်ရာသီဥတုကိုကျဆင်းစေသည်, ထို့အပြင်, ကားတစ်စီးငှားရမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်စိတ်မပူပါနဲ့, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာဥရောပရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုရထားနဲ့ရောမမြို့သို့အလွယ်တကူသွားလာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. ထက်ပိုအဆင်ပြေဘာမျှရှိပါတယ် မီးရထားခရီးသွားလာ Trenitalia ၏မြန်နှုန်းမြင့်ခေတ်သစ်နှင့်အဆင့်မြင့်ရထားများတွင်. နှစ်သိမ့်မှုနှင့်ရထားပေါ်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်, သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ရထားလက်မှတ်များအတွက်အထူးလျှော့စျေးများကိုသင်ရနိုင်သည်.
Duomo နှင့်လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ၏ 'နောက်ဆုံးညစာ' သည်မီလန်အားအနုပညာနှင့်သမိုင်းချစ်သူများအတွက်ပရဒိသုဖြစ်စေသည်. ဗိသုကာကျောက်မျက်ဖြစ်ခြင်းအပြင်, မီလန်အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်အလွန်ဖော်ရွေသည်နှင့်ပင်အနိုင်ရခဲ့သည် 2016 အီးယူ Access ကို. ထို့ကြောင့်မီလန်သည်ဥရောပသို့အဆင့်မြင့်ခရီးသွားများအတွက်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်.
မင်းအသက် ၆၀ ကျော်ရင်လှပတဲ့နေထိုင်မှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ, ထို့နောက်သင်သည် Milan ၌လုံးဝအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချိန်ကိုရရှိလိမ့်မည်. အဆိုပါ အီတလီအစားအစာ, အဆိုပါ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဗိသုကာ Basilicas ၏, အနုပညာပြခန်း, ပြီးတော့ပြတိုက်တွေကမင်းကိုတော်ဝင်မင်းယူစေလိမ့်မယ်. မီလန်မှာ, သငျသညျကျိန်းသေတစ် ဦး ခေါက်ဆွဲချက်ပြုတ်လူတန်းစား join သင့်တယ်, ပြီးပြည့်စုံသောခေါက်ဆွဲငံပြာရည်စာရွက်သင်ယူဖို့သိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှကြောင့်သင်အိမ်ပြန် la Dolce Vita ထပ်မံဖန်တီးနိုင်အောင်.
Bruges ရှိဘူတာရုံသည်အကြောင်းပါ 10-20 မြို့လယ်ခေါင်မှမိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရသည်, ဒါကြောင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ယူကေမှာဘယ်နေရာကိုမဆိုသွားနိုင်တယ်.
Baden-Baden ရှိ spa အားလပ်ရက်သည်ဥရောပရှိအကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. အဆိုပါငြိမ်းချမ်းအရှိန်အဟုန်, ဓာတ်သတ္တုနှင့်ရွှံ့ spa ကုသမှု, Paradies ကဲ့သို့လှပသောဥယျာဉ်တော်, မိုa်းကောင်းကင်တစ်ဖဲ့ကိုဖန်တီးပါ. သို့သျောလညျး, သင်အားလပ်ရက်များ၌တက်ကြွစွာနေလိုလျှင်, ဒါတွေရှိတယ် ဂေါက်ကွင်းများနှင့်အားကစားကလပ်များ တွင် Baden-Baden မင်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “7 အကြီးတန်းခရီးသွားများအတွက်သွားရောက်ရန်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-visit-senior-travelers%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)